Su'aalaha Muhiimka ah ee Iskuxirka Corlu ee Burburka Corlu Sidee loo helaa? | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara59 CorluSu'aalaha Muhiimka ah ee Iskuxirka Corlu ee Burburka Corlu Sidee loo helaa?
Su'aalaha Muhiimka ah ee Iskuxirka Corlu ee Burburka Corlu Sidee loo helaa?
04 / 12 / 2019 59 Corlu, 59 Tekirdag, tareenka, GUUD, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY
Su’aasha furaha ah ee tareenka Corlu su’aasha ah sidee buu u xirnaa
Su’aal Muhiim ah oo Corlu Tareenka Burburkiyo Sidee Ballast Worn ?; 7 25, maxkamad wareegii saddexaad ee kiiska eedaysanaha ee 4, oo laga furay Çorlu oo ku saabsan shilka tareenka ee ilmuhu ku dhintay 10, ayaa la qaban doonaa bisha Diseembar. Tan waxaa la rajaynayaa in la go’aamiyo in la sameeyo guddi khubaro ah oo warbixin ka siiya dhibanayaasha ka hor dhagaysiga, ‘TCDD Senior Management’ oo hoos tagaya magaca 1.5 ee socda baadhitaanka ballaadhan ee kiiska codsi ah in la ballaariyo baaritaanka ballaarinta ayaa isku diyaarinaya in uu codsado dacwad oogaha.
Wargeyska WargeyskaSida laga soo xigtay Serkan Alan; 25 300 waxaa lagu qabanayaa bisha Diseembar maxkamada xalinta ciqaabta ee 10 ee Çorlu dacwada wareega sedexaad ee shilalka tareenka ee 1 lagu dilay magaalada Çorlu. Si kastaba ha noqotee, baaritaanka "1.5", oo ay kujirto "Maareynta Sare ee TCDD için si loo muujiyo dayacaad sababay lakabka ballaadhan ee xirtay inta lagu jiray musiibada tareenka, ma muujin wax horumar ah sanadka. 5 wuxuu tagi doonaa Xafiiska Xeer Ilaaliyaha Guud ee Khamiista Khamiista wuxuuna u gudbin doonaa codsiyada xafiiska xeer ilaaliyaha isagoo codsanaya in la kordhiyo baaritaanka.
'Muuqaal SIYAASADDA SIYAASADA'
Shilka tareenka kadib, xafiiska 'dacwad oogaha guud ee Çorlu wuxuu bilaabay baaritaan ka dhan ah siyaasiyiinta, xafiisyada iyo shakhsiyaadka ugu sareeya maamulka TCDD asagoo ku saleynaya "sababa dhimashada iyo dhaawaca dayaca ee olmadı ma aysan aheyn meel lagu maxkamadeeyo. Baadhitaan la sameeyay si loogu daboolo CD-ga Sare ee Maareynta TCDD adına si loo muujiyo dayacaad sababay nabaad-ballaarinta, 1.5 haray looma hagaajin sannadka. Sevgi Evren, oo ah qareenka dacwada, ayaa u jawaabay su’aasheena: “Dhinac, ma jiraan wax dib u dhac ah oo ku aadan sameynta baaritaan kale oo la mid ah dhacdadan inta maxkamadu socoto?
Aadan halkii ay ka cidhiidhi gelin lahayd, tani waa muuqaalka siyaasad la aanta. Turkey waxaa la kulma hab this nidaamka garsoorka. Hadaad rabto inaad qof ilaaliso, waad ka aamusin kartaa faylka ku saabsan. Waad yaabeysaa, waxaad iska dhigtaa inaad baarayso, ka dibna waad xidhay iyada oo aan wax raad ah la raacin. Waxay rabeen inay mar labaad mar kale sameeyaan, laakiin way kari waayeen. Sababtoo ah qoysasku waxay ka bilaabeen aag hortooda maxkamadda horteeda waxayna yiraahdeen waan dagaallami doonnaa illaa xaqiiqda ku saabsan dhacdooyinkaan la soo bandhigo oo kuwa mas'uulka ka ah ay soo baxayaan. ' Faylkan 'serialization' ah lama xidhi karo sanad iyo badh. In kasta oo xeer ilaalintu isku deyeyso inay baadho dusha sare, waxaan dhahnaa waxaan u baahanahay inaan eegno qodobadan iyo dadka. shilalka shaqada ee Turkey, laga tegay, dababka Qolal, Soma iyo wixii ka dhacay Çorlu sabab u ah dadaalka ay file this in la xisaabtan la'aanta. "
'WAAJIBAADKA RAACIIDU WAA LAGU SAAMEEYAA Meeshaay ganacsaduhu ku nool yahay'
Qareenada dhibanaha ee dhageysiga wareega labaad isla markiiba ka dib shilkii ay diyaariyeen codsi ka yimid xafiiska xeer ilaaliyaha ayaa ka soo horjeestay warbixinta khubarada waxayna codsadeen diyaarinta warbixin cusub. Mustafa Karaşahin iyo Sıddık Yarman, oo galay xukunkan isla markaana xiriir ganacsi toos ah la leh TCDD, waxay go’aansadeen inay diyaariyaan warbixin cusub waxayna codsadeen magaca khabiirka dhageysiga labaad kadib.
Garyaqaanka Sevim Evren ayaa sheegay in maxkamadu ay u qortay tiro xaddidan jaamacadaha ay ka mid yihiin Jaamacadda Sakarya, Jaamacadda Boğaziçi, Istanbul Technical University (ITU) iyo Jaamacadda Eskişehir Osmangazi.
Garsooraha maxkamada ayaa sheegay in koox ay go aansan doonaan gudiga maxkamada ay soo diyaarin doonaan warbixinta ka dhaceysa magacyada ka soo baxay jaamacadaha iyo in gudiga ay sameyn doonaan soo ogaasho kadib aqbalaada dhageysiga sedexaad. Hadda maxkamadda ayaa iskaa u magacaabi doonta liisaska magacyada. Haddii aan aragno guddigan oo aan ku filnayn, waxaan codsanaynaa khubaro cusub in lagu daro guddigaan. Tan waxaa lagu shaacin doonaa maxkamad wareega saddexaad. Casharkan, waxaa la rajaynayaa in la dhiso guddi u eeg doona arrintan in ay yihiin dhibaato dadweyne oo leh tayo sare, dhexdhexaadnimo ugu sareysa iyo in go'aan laga gaaro daahfurka meesha shilku ka dhacay. ”
MACHADKA ITOOBIYA EE ITU KU SAMEEYSA MACLUUMAADKA KASOO BAXAY IN AY KA CAAWIN KARO mashruuca
Evren wuxuu sharraxay sababta sababta aqoonyahan cilmiga u shaqeeya uga shaqeeya ITU uusan ugu shaqeynin sidii khabiir:
Bir Macallin ka tirsan ITU ayaa diiday soo-jeedinta khubarada jaamacadda, isagoo sheegay inuu ku lug lahaa mashruuca uu shilku ka dhacay. Taasi waa wax fiican. Waxaan leenahay cabasho dambi ah oo ku saabsan khubaro kale. Xubin ka tirsan guddiga shirkadda oo shaqsiyan lasiiyay gundhigga calaamadda calaamadda ee tareenka ayaa loo magacaabay inuu khabiir ku yahay heerka dacwad qaadista. Aqoonta noocaas ah lama sameyn karo. Aad ayey muhiim u tahay in macallin ka socda ITU uu diido inuu sidaas sameeyo. Tani waxay ina tusaysaa in shuruudahayaga la maqlo ama aad u yar.
CODSATAY MAXKAMADA 'WIILAALADA WAAJIBAANKA'
Go'aanka ku meel gaarka ah ee dhageysiga wareegga labaad, maxkamaddu waxay u dejisay 4 inuu yahay markhaati qofkii 3 ee la isku dayay iyada oo aan la xirin oo wuxuu go'aansaday inuu ka qaato qoraalkooda gudaha maxkamadaha ku dhow meelaha ay wax ku dhigaan. Qareenada dhibanayaashu waxay sheegeen in eedeysanayaasha la xukumo in ay warbixin ka soo qaataan maxkamada wareega sedexaad ee dhageysiga la filayo in go’aan laga gaaro. Qareennada dhibanaha, saddexda ayaa loo aqoonsaday inay yihiin markhaatiyaal marka lagu daro dadka heerka sare ah ee jooga qolka maxkamadda oo waydii su'aalo la keenayo.
Dhanka kale, cabashada, oo aan wali marqaati furin, waxay maxkamadda u sheegi doonaan wareegga saddexaad ee dhageysiga '10 December' maalinta iyo ka dib shilku dhacay.
4 WAA LOO BAAHAN YAHAY GUDDIYADA XUKUUMADA 3
Dhageysiga wareegga saddexaad, codsi ka yimid qareennada dhibanaha ayaa noqon doona xirnaanshaha eedaysanaha 4 ee maxkamadaynta. Agaasime Goboleedka TCDD 3 ee dadka lagu ciqaabay inta u dhaxaysa sannadihii 2 iyo 15 sano ee loo haystay 'sababa dhimashada iyo dhaawaca dayacaad la'aanta' Halkalı Turgut Kurt wuxuu u shaqeeyey Maareeyaha Dayactirka Waddada Tareenka ee 14 Maareeyaha Dayactirka Waddada Tareenka. Çerkezköy Özkan Polat, Madaxa Dayactirka iyo Dayactirka Wadooyinka ee Agaasinka Dayactirka Wadooyinka iyo Çetin Yıldırım, oo ah madaxa buundooyinka ee TCDD, ma aqbalin dalabka qareenada codsaday qabashada dhageysiga wareega labaad. Qareenada ma dalbana in la xiro Celaleddin Çabuk, oo ah kalkaaliyaha dayactirka iyo dayactirka ee Madaxa Dayactirka Wadooyinka, eedeeye kale.
Ogaysiinta wax soo iibsiga: Afar xitaa albaabbada albaabbada albaabbada albaabka xakamaynta Gawaarida gurmadka guryaha (TÜVASAŞ)
Ogeysiiska Qandaraaska: Mashiinka baaritaanka ballastiga ayaa lagu rakibayaa baaritaanka ballastiga
Ogeysiiska Qandaraaska: Hantida iibsashada ballastka iyada oo la gaarsiinayo gawaarida la geeyo saldhigyada Tarabuunka iyo Velimeşe
Ogeysiiska Qandaraaska: Ballast waxaa lagu iibsan doonaa iyada oo la keenayo saldhigyada Tarbool iyo Velimeşe
Ogeysiiska Dalabaadka: Tijaabinta Ballastiyada lixda mashiinka mashiinka dhejiska ah ayaa la gadan doonaa
Dalabka dalbashada tareenka xajmiga ballastada ee mashiinka mashiinnada dhuxusha ayaa la ururiyey
TCDD farsamooyinka farsamooyinka gawaarida tikidhada maraakiibta xamuulka qaada ee maraakiibta
Jidka Darülaceze Metrobus wuxuu ku yaal meel ka soo horjeedda Xarunta Ganacsiga ee Okmeydanı Perpa.
Su'aal Muhiimka ah oo Iskuxirka Burburkii Tareenka Corlu
Sidee Ballast Worn
Agaasinka Dayactirka Wadada
Maareynta Sare ee TCDD
Xarunta Erciyes Ski Center ayaa furmaysa Xilli